Taliyihii Ciidanka Xoogga DF-ka Oo iscasilay Kadib Weeraro Askar lagu Laayay oo Al Shabaab Ay Ka Fulisay Soomaaliya.
Thursday October 12, 2017 - 17:35:22 in Wararka by Super Admin
Kadib weeraro laayaan ah oo ciidamadiisa ku qabsaday Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ayuu ugu dambeyn is casilaad ku dhawaaqay taliyihii ugu sarreeyay ciidanka melleteriga dowladda Federaalka Soomaaliya.
Jeneraal Axmed Jimcaale Cirfiid ayaa si lama filaan ah isaga casilay xilkii uu u hayay dowladda Federaalka oo ahaa ‘Taliyaha ciidanka xoogga’, ilo wareedyo ayaa sheegaya in Cirfiid uu warqadda istiqaalada u dhiibay Farmaajo.
Taliyaha cusub ee ciidanka DF-ka ayaa durbadiiba loo magacaabay Jeneraal Jimcaale Warsame Gorod, Cirfiidkii ayaa xilka taliyaha ciidanka xoogga qabtay Bishii April,2016.
Xarakada Al Shabaab ayaa la rumeysanyahay in ay sabab u tahay iscasillaadda Jeneraal Cirfiid kadib markii ay qaadday Olole dagaaleed lagu dilay boqolaal katirsan ciidamada dowladda Federaalka islamarkaana ay qabsatay saldhigyo waaweyn.
Lixdii bilood ee uu xilka hayay Jeneraal Cirfiid ayay xarakada Al Shabaab qaadday illaa iyo Afar Weerar oo dhammaantood saldhigyo melleteri lagu qabsaday gaadiid dagaal iyo hubna lagula wareegay.
Weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee Al Shabaab qaadday waxaa kamid ahaa weerarkii Beled Xaawo oo lagu dilay 40 Askari, weerarkii Bariire oo lagu dilay 95 Askari, weerarkii Buula Guduud oo lagu dilay 26 Askari iyo weerarkii Teed oo askar iyo saraakiil badan ay ku dhinteen iyo sidoo kale weerarkii degmada Ceelwaaq. waxaa kale oo jiray weeraro lagu dilay Jeneraallo oo ka dhacay degmooyinka gobolka Banaadir.